I-china CY-3 (Ordinary outdoor push-pull clothes hanger) abakhiqizi nabaphakeli | UJialong
Impilo iqala ngokumisa izingubo
Isisindo sezinti ezintathu 0.67kg 0.84kg 1.26kg 1.68kg 2.1kg 2.15kg
Isisindo sezingongolo ezine 0.89kg 1.12kg 1.68kg 2.24kg 2.8kg 2.30kg
Ubukhulu Bodonga Lwesiteshi Sesimbi
Kukalwa ngokulinganayo ama-50 kg, angahlangabezana nezidingo zawo wonke umndeni ukuze womile. Kuthuthukiswe inqubo yokugcwala ebusweni.
Umbala we-champagne uphathwa yi-electrophoresis, engabuni, engenakho ukugqwala, eqinile futhi eqinile, futhi egcina umkhiqizo ukhanya futhi uhlanzekile.
Insimbi yesiteshi sokusekelwa yamukela ukwakheka kwe-slot yendiza, futhi amandla okusekela anamandla kune-CY-1, CY-2, futhi ipayipi liyajiya futhi libonakala likhulu ngokwengeziwe.
Faka:Kulula ukufaka nokuqaqa. Inqobo nje uma ugoqa isikulufa esisodwa, ungasusa bese usiphatha. Ngomuzi omude, khulisa indlela yokomisa umoya engangeni endaweni yangaphakathi.
Impendulo yekhasimende:Intengo eshibhile ayithinti ikhwalithi yakhe. Kungaphezu komcabango. Kwenziwe kahle kakhulu ngokuningiliziwe. Ihlala icabanga ukuthi izothuthumela kakhulu, kepha ibizinzile ngemuva kokufakwa, okuxazulule inkinga yokukhanya okunganele.
Inzuzo:I-rack yethu yokudonsa nezingubo zethu ngeke isetshenziselwe ukomisa izingubo kuphela, uma kuvulandi yinde ngokwanele, singenza ngokwezifiso isigxobo eside, ukuze sikwazi futhi ukomisa umgogodla, futhi siqede kangcono ukubulala amagciwane kanye nokuvala inzalo. ekukhiqizweni kwamaraki wezingubo iminyaka engaphezu kweyishumi, ikhwalithi izoqinisekisa kakhulu uma iqhathaniswa nabanye abakhiqizi, futhi sizobheka eminye imininingwane. Impahla eluhlaza esiyisebenzisayo yi-A00 aluminium, okungelula ukuyiphela futhi i-oxidize, futhi iqinile kakhulu.
ikhwalithi yomkhiqizo:Sinombiko wokuhlolwa kwesitifiketi sikazwelonke, futhi unomuntu owabelwe ngokukhethekile ukuhlola, uqinisekisa izinga lekhwalithi yomkhiqizo. Siqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo kungakapheli iminyaka emithathu kuya kwemihlanu, futhi ngeke ibune nokugqwala.
Langaphambilini I-CY-4 (okokugqoka kwezingubo zikagesi ezi-Intelligent)
Olandelayo: I-CY-2 (Isiphanyeko esivamile sangaphandle sokudonsa izingubo)